တရုတ် စည်သွတ်စွပ်ပြုတ် ဝက်သား ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ - Hebei Oceane
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အဆင်သင့်ဝက်သား > စည်သွတ်စွပ်ပြုတ်ဝက်သား
စည်သွပ်စွပ်ပြုတ်ဝက်သားကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး၊ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး မျှဝေခြင်းကို အာရုံစိုက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်တပ်နှင့် အရပ်ဘက်နယ်ပယ်တွင် နှစ် 60 ကျော်ကြာ စည်သွပ်စွပ်ပြုတ် ဝက်သားကို လက်ကားရောင်းချရန် ကတိပြုထားသည်။ သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော တရုတ်စည်သွတ်စွပ်ပြုတ် ဝက်သားဖော်ဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်သွတ်စွပ်ပြုတ်တွင် ဝက်သား၊ ရေ၊ ပဲငံပြာရည်၊ သကြား၊ ဆား၊ ဝိဥာဉ်၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ကြာရှည်ခံသော သို့မဟုတ် အတုအပမပါဘဲ အရသာအပြည့်ဖြင့် ချက်ပြုတ်ပြီးပါက အရသာအလွန်ကောင်းမွန်ပါသည် တောင်းရမ်းစားသောက်နေပါမည်။ ပို.
၁။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အာဟာရတွေ ပိုစားပါ။
လတ်ဆတ်သော ကုန်ကြမ်းများ၏ အာဟာရကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများ မထည့်ပါနှင့်။ အအေးခန်း ထားရန် မလိုအပ်ဘဲ သိုလှောင် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရာတွင် လွယ်ကူ ချောမွေ့ သောကြောင့် တပ်မတော် မှ စည်သွပ် အစားအစာ များသည် ဘေးကင်းရေး၊ အာဟာရ နှင့် ကျန်းမာရေး တို့ ကြောင့် ရွေးချယ်မှု ကောင်း ပါသည်။
2. အချိန်မရွေး အမြန်အစာအတွက် အသင့်သုံးပါ။
3. အတုအရောင်များ ၊ ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများ မပါရှိပါ။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တင်သွင်းပြီးပြည်တွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 12၊ စက်ကိရိယာ 500sets ကျော်၊ အဆင့်မြင့်စက်ယန္တရားများနှင့်စက်ကိရိယာများ၊ စည်သွတ်စွပ်ပြုတ်ဝက်သား၏အရည်အသွေးနှင့်အရသာကိုသေချာစေရန်အတွက် ISO9001၊ HACCP စသည်တို့ကိုအတူတကွအောင်မြင်ပြီး OEM နှင့် ODM ဝန်ဆောင်မှုများသည် စားသုံးသူများ၏ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်။
အရသာကောင်း အစားအစာ စည်သွပ်စွပ်ပြုတ် ဝက်သား
အရသာကောင်းမွန်သောအစားအစာ စည်သွပ်စွပ်ပြုတ်ဝက်သားသည် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနယ်ပယ်မှာ နှစ် 60 ကျော် အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရသာကောင်းမွန်သော အစားအစာ စည်သွပ်စွပ်ပြုတ်ထားသော ဝက်သားသည် မတူညီသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကွဲပြားပါသည်။ ပြင်ပအစားအစာ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာမည်မှာ သေချာပါသည်။
အဆင်သင့် ဝက်သားစားရန် အဆင်သင့်
အဆင်သင့်စားရန် အဆင်သင့် ဝက်သားသည် အဖုံးဖွင့်ကာ စားသုံးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး သဲလွန်စဒြပ်စင်များနှင့် အာဟာရဓာတ်များစွာ ကြွယ်ဝပါသည်။ ခေါက်ဆွဲ၊ ထမင်းစသည့် အစားအစာ အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်သည်။ သင့်အိမ်လုပ် မုန့်ဖုတ်လုပ်နည်း (သို့) ရိုးရှင်းသော အရံဟင်းအဖြစ်၊ ၎င်းသည် ဖောက်သည်များအတွက် အရသာရှိပြီး ရောင်းအားကောင်းပါသည်။ Ocean Food Factory သည် စည်သွတ်ဘူးများကို ထုတ်လုပ်သူနှင့် လက်ကားရောင်းချသူဖြစ်သည်။
အညိုရောင်ဆော့စ်နဲ့ ဝက်သားစည်သွပ်ဘူးရဲ့ အရသာက အပြင်ဘက်မှာ မီးတောက်နေပြီး အတွင်းပိုင်းမှာတော့ နူးညံ့ပြီး အရသာရှိပြီး အဆီကျပေမယ့် အဆီမပြန်ပါဘူး။ အညိုရောင်ဆော့စ်ဖြင့် စည်သွတ်ထားသော ဝက်သားစည်သွပ်အစားအစာသည် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဟင်းပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိက အစားအစာတိုင်းတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများရှိသည်။
စည်သွပ်ပြုတ်ထားသော ဝက်သားသည် အရည်အသွေးမြင့် ပရိုတင်းနှင့် မရှိမဖြစ် ဖက်တီးအက်ဆစ်များ ကြွယ်ဝပြီး သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် heme (အော်ဂဲနစ်သံ) နှင့် cysteine ​​တို့ကို ပံ့ပိုးပေးကာ သံဓာတ်ချို့တဲ့သွေးအားနည်းရောဂါကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ အညိုရောင်ဆော့စ်နဲ့ ဝက်သားပြုတ်ကို လူတိုင်းကြိုက်ကြပြီး အာဟာရတန်ဖိုးမြင့်မားတာကြောင့်သာမက အရသာကောင်းတာကြောင့်လည်း စားချင်ကြပါတယ်။ အများအားဖြင့် ပဲငံပြာရည်နဲ့ ရောထားတဲ့ ထမင်းက စားလို့ကောင်းတယ်။
စည်သွတ်ပြုတ်ထားသော ဝက်သားသည် တရုတ်ရိုးရာ လူကြိုက်များသော ဟင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် အကောင်းဆုံးသော ဝက်သားဗိုက်ကို ပစ္စည်းအဖြစ် ထည့်သွင်းကာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ ထည့်ကာ အရသာရှိသော အစားအစာ ဖြစ်လာစေရန်။
ဝက်သားပြုတ်ထားသော စည်သွပ်ဘူးများတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ ဝက်သား၊ သောက်ရေ၊ ပဲငံပြာရည် သို့မဟုတ် ပဲငံပြာရည်အစိမ်း၊ သကြားဖြူ၊ ဆား၊ ဟင်းချက်ဝိုင်စသည်ဖြင့် ဝက်သားပြုတ်ထားသော စည်သွပ်ဘူးများသည် ပေါင်းထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ပြုတ်ခြင်း သည် ပွက်ပွက်ဆူပြီးနောက် ထွက်လာသော အပူလွှဲပြောင်းလတ်ကို အသုံးပြု၍ အစားအစာ ရင့်ကျက်စေရန် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ချက်ပြုတ်ရာတွင် အဓိက အစားအစာနှင့် အဆာပြေ နှစ်မျိုးလုံး ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဟင်းလျာများချက်ပြုတ်ရာတွင် တစ်ပိုင်းကုန်ချောထုတ်ကုန်များ၏ ပဏာမအပူကုသမှုအတွက်သာမက အချောထည်ပစ္စည်းများကို ရင့်ကျက်မှု သို့မဟုတ် ပျော့ပျောင်းစေရန်အတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော နောက်ဆုံးပေါ် စည်သွတ်စွပ်ပြုတ်ဝက်သား ကို ရှာဖွေနေပါသလား။ Hebei Oceane သည် သင်၏ လက်တွဲဖော်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် HACCP လက်မှတ်ရရှိရုံသာမက ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လည်း လက်ကားရောင်းချနိုင်သည့် စည်သွတ်စွပ်ပြုတ်ဝက်သား ကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သော ဖန်စီထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ ယင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တရုတ်နိုင်ငံရှိ ထင်ရှားသော ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လာစေခဲ့သည်။